HTC U12 + - အသစ်ပေါက်ကြားခဲ့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ…ယင်း၏စျေးနှုန်းသည်အလွန်!
တင်ဆက်ပြီးတစ်ရက်အကြာတွင် HTC U12 + ၏စျေးနှုန်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ထိုင်ဝမ်၏မိုဘိုင်းဖုန်းသစ်ကို SD845 SoC ဖြင့်ရောင်းချမည်၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်မျက်နှာပြင်နှင့်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုမငြူစူနိုင်ပါ။ ဒါကအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးမှာသေချာပါတယ်။
ပြန်လည်သုံးသပ် Fluid + Form Eagle 4K၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောတန်ဖိုးနည်းလုပ်ဆောင်မှုကင်မရာ
အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်သော၊ ကောင်းမွန်ပြီးစျေးပေါသောလုပ်ဆောင်မှုကင်မရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါကရွှေအလေးချိန်ရှိသည့်တန်ဖိုးနည်းလုပ်ဆောင်မှုကင်မရာဖြစ်သော Fluid + Form ကင်မရာ၏ဤဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုသင်မလွတ်နိုင်ပါ။
အတည်ပြုခဲ့သည် - Xiaomi Mi 8 ကိုမေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ပြသပါမည်
တရားဝင်တရားဝင်: Xiaomi Mi 8 ကိုမေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ရောက်ရှိလာမည့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှဖုန်းအသစ်၏တင်ဆက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်Mostပြီလတွင်အာဏာအရှိဆုံးဖုန်း ၁၀ လုံးကို AnTuTu Benchmark အရသိရသည်
AnTuTu သည်စျေးကွက်အတွင်းတစ်လမှတစ်လအထိစွမ်းအားအရှိဆုံး terminal များစာရင်းကိုဖော်ပြပေးသည်။ ထိုအချိန်၌ Xiaomi Black Shark ဟုခေါ်သောဂိမ်းကုမ္ပဏီစမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုလွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်များကတရုတ်ကုမ္ပဏီမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Nokia X6 ကို ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချသည်
Nokia X6 သည် ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရောင်းထွက်ခဲ့သည်။ တရုတ်ဈေးကွက်တွင် Nokia ဖုန်းသစ်မည်မျှအောင်မြင်သည်ကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy J8 အသစ် - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်း၊
Samsung Galaxy J8 အသစ်၏အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရောင်းချခဲ့သော terminal ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
Samsung Galaxy J6: Android Oreo တွင် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အကွာအဝေးသည်
Samsung Galaxy J6: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှု။ ယနေ့ထုတ်ဖော်ပြသသည့်ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှ ၀ င်ရောက်မှုအဆင့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy S Light Luxury: Galaxy S8 ၏ Lite ဗားရှင်း
Samsung Galaxy S Light Luxury: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှု။ ယနေ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သောကိုရီးယားတံဆိပ်မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Bixby 2.0 သည် Galaxy Note9ဖြင့်စျေးကွက်ထဲသို့ရောက်သွားနိုင်သည်
Samsung ၏ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက် Bixby က Galaxy Note9ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည့်ဒုတိယ version ကိုဇူလိုင်လနောက်ဆုံးလတွင်ဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi Max3ကိုယခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဖြန့်ချိမည်
Xiaomi Mi Max3ကိုဇူလိုင်လမှာဈေးကွက်ထဲဖြန့်ချိမယ်။ ဒီနွေရာသီမှာတရားဝင်တင်ဆက်ပြသမယ့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းစတင်လေ့လာပါ။
Huawei Y5 Prime 2018: Y အကွာအဝေးတွင်ရှိသောဖုန်းအသစ်
Huawei Y5 Prime 2018 ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးအရအများဆုံးအထိရောက်ဆုံးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy S Light Luxury (Galaxy S8 Lite) ကိုယနေ့တွင်ပြသမည်
Samsung က Galaxy S Light Luxury ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်။ ယနေ့ဖွင့်သည့်ကိုးရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung က iPhone နှင့် Batterygate ကို၎င်း၏ကြော်ငြာအသစ်တွင်လှောင်ပြောင်သည်
Samsung က Apple ကိုလှောင်ပြောင်သည့်ကြော်ငြာအသစ်တစ်ခု ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အဓိကပြိုင်ဘက်အားပြောင်လှောင်ထားသောကြော်ငြာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Redmi 5A သည်မတ်လတွင်ကမ္ဘာ့အရောင်းရဆုံး Android ဖုန်းဖြစ်သည်
Xiaomi Redmi 5A သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယအရောင်းရဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ အရောင်းရဆုံး Android ပစ္စည်းဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung က Galaxy Note9ကိုဇူလိုင်လအထိတိုးမြှင့်နိုင်မယ်
ကိုရီးယားမီဒီယာအမျိုးမျိုး၏အဆိုအရ Samsung ကုမ္ပဏီသည်Noteဂုတ်လအစားဇူလိုင်လတွင်စတင်ရောင်းချမည့်နေ့ရက်ဖြစ်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
Galaxy S7 နှင့် S7 + အတွက် Oreo update ကိုထပ်မံရရှိနိုင်သည်
နောက်ဆုံး Android Oreo update ကို Galaxy S7 နှင့် S7 Edge မှဖယ်ရှားပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ထိုအမှားကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ၎င်းစက်ကိုထပ်မံမွမ်းမံရန်ခွင့်ပြုသည်။
Honor 10 သည်ဥရောပတွင်ပထမဆုံးရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်
Honor 10 သည်ဥရောပ၌အစောပိုင်းကာလများကကုန်ဆုံးခဲ့သည်။ ဥရောပ၌စတင်မိတ်ဆက်စဉ်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အောင်မြင်မှုသည်အောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Bixby 2.0 သည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးသင့်ကိုပိုမိုနားလည်လိမ့်မည်
Bixby 2.0 သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီးအသုံးပြုသူကိုပိုမိုနားလည်စေသည်။ ယခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိလာမည့်ကုမ္ပဏီလက်ထောက်ဗားရှင်းအသစ်တွင်မိတ်ဆက်မည့်တိုးတက်မှုများအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
အသစ်ထွက်ပေါ်လာသော Samsung Galaxy J4 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Samsung Galaxy မိသားစုမှ J စီးရီးများသည်မကြာမီရောက်ရှိလာမည့်အသင်းဝင်အသစ်ဖြစ်သော Samsung Galaxy J4 ကိုလက်ခံရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်ကုန်လွန်သွားလျှင်နောက်လာမည့်အနိမ့်ဆုံးရောက်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤမိုဘိုင်းတပ်ဆင်ထားသည့်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကြောင့်၎င်းကိုရှေးရိုးစွဲနည်းဖြင့်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
OnePlus6သည်အကျော်ကြားဆုံးခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံရ၏
OnePlus6သည် JerryRigEeverthing ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံရ၏။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်လူကြိုက်များသည့်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤဆောင်းပါး၌ OnePlus6၏လက်မှလာသည့်နောက်ခံပုံအသစ်များကိုသူတို့၏မူလ resolution ဖြင့်တွေ့လိမ့်မည်။
စပိန်နိုင်ငံရှိ Nokia 8 Sirocco စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
MWC တွင် Nokia တင်ပြခဲ့သော high-end terminal ဖြစ်သော Nokia 8 Sirocco သည်နောက်ဆုံးတွင်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်သည့်ရက်စွဲနှင့်စျေးနှုန်းကိုရရှိခဲ့သည်။
Samsung သည် Exynos ပရိုဆက်ဆာများကို ZTE သို့ရောင်းချနိုင်သည်
ZTE သည် Samsung Exynos ပရိုဆက်ဆာများကို ၀ ယ်ယူရန်ဆွေးနွေးနေသည်။ ပရိုဆက်ဆာများ ၀ ယ်ရန်သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားအဆက်အသွယ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi ကမေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာဖုန်းအသစ်ကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်
Xiaomi မှမေလ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ကုန်အသစ်များပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အသစ်များမိတ်ဆက်ရန်ပြင်ဆင်နေသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏တင်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
ASUS Zenfone Live L1: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ အာရှ၌ဖြန့်ချိပြီးသောအမှတ်တံဆိပ်၏ entry-level ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HTC U12 + - ဒီဇိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီပေါက်ကြားခဲ့သည်။ လာမယ့်သီတင်းပတ်မှာတင်ဆက်မယ့်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်အကြောင်းအသေးစိတ်လေ့လာပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Lenovo မှပိုင်ဆိုင်သည့် Motorola သည် Moto 1S အသစ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက Moto G6 Play နှင့် Moto G6 Plus တို့နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်လကစတင်ခဲ့သည်။
OnePlus 6: ကုမ္ပဏီ၏အထင်ကရသစ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သော OnePlus သည်၎င်း၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ OnePlus6နှင့် OneTlus 5T ၏နောက်ဆက်တွဲကိရိယာနှစ်ခုဖြစ်သော AnTuTu ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခု၌တည်ရှိပြီး၎င်းနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်အားအကောင်းဆုံးသောယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဈေးကွက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။
HDR ရှိ Netflix သည် Sony Xperia XZ2, Huawei P20 နှင့် Mate 10 Pro နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
Xperia XZ2၊ Huawei P20 နှင့် Mate 10 Pro တို့က Netflix HDR ကိုထောက်ပံ့သည်။ ဤအရာများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပြီးဤအကြောင်းအရာများကိုအကောင်းဆုံး resolution ဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Xiaomi E6 ကို Geekbench တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်
Xiaomi E6 ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ Geekbench တွင်မည်သည့်အရာမျှမသိရှိရသေးသည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy S9 သည်အရောင်နှစ်မျိုးကိုရရှိသည်
ထပ်မံ၍ ကိုးရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းများဖြစ်သော Galaxy S7 နှင့် S7 Plus အား Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုစျေးကွက်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
Samsung Galaxy S7 ၏ Android Oreo update ကို Samsung ကရပ်ဆိုင်းလိုက်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်၎င်းတို့၏ဆာဗာများမှ Galaxy S7 နှင့် S7 Plus အတွက် Android Oreo update ကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
Galaxy S9 သည်တောင်ကိုရီးယားတွင်ရောင်းအားတစ်သန်းကျော်သည်
Galaxy S9 ကိုကိုရီးယားမှာရောင်းအားတစ်သန်းအထိရခဲ့တယ်။ ယခင်မျိုးဆက်များထက်ပိုမိုနှေးကွေးနေသောကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်အရောင်းအဝယ်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus6ကို Amazon တွင်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
အာရှကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် OnePlus က၎င်း၏ e-commerce ကုမ္ပဏီ Amazon နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီး၎င်း၏နောက်တန်းအလှကုန်ပစ္စည်းကို Amazon မှတစ်ဆင့်ရောင်းချရန်ဖြစ်သည်။
HTC မှထွက်မြောက်ခြင်း - အမှတ်တံဆိပ်၏ Blockchain ဖုန်း
HTC ထွက်မြောက်ရာ - ယခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးသော Blockchain ဖုန်းဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်မည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
စပိန်နိုင်ငံရှိ Honor 10 စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
စပိန်နိုင်ငံ Honor 10 စျေးကွက်တွင်စတင်ဖြန့်ချိရန်သင်စောင့်နေခဲ့လျှင်၎င်းသည် 399 GB ဗားရှင်းဖြင့်ယူရို ၃၉၉ သာရနိုင်သည်။
Samsung Galaxy J6 ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည့် Galaxy J6 ၏နောက်ထပ် terminal ၏ပထမပုံရိပ်ကိုပြသသည်
Xiaomi သည်စပိန်တွင်တတိယရောင်းအားအကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရောင်းရဆုံးရောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရှိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ကြီးထွားမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Insta360 ONE သုံးသပ်ချက် - သင်၏အမှတ်တရများကို360ºတွင်သိမ်းဆည်းပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Insta360 ONE 360ºကင်မရာ၊ iPhone နှင့် iPad အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကင်မရာကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်ပြီးစစ်ဆေးသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်အပြင်၊ Android နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်အပိုပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ပြသထားသောလှည့်ကွက်များကြောင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Nokia X6 ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်၎င်းကိုမတင်ပြမီဖော်ပြခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က Nokia X6 ၏အဓိကအရည်အသွေးများကိုယခုအချိန်တွင်စစ်ထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် notch design နှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားအဖြစ်သတ်မှတ်သည့်အခြားအရည်အသွေးများနှင့်အတူလက်တွဲလာမည့်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်စမတ်ဖုန်းကိုစစ်ထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Xintomi ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ Lightinthebox မှကမ်းလှမ်းထားသည့်ထူးခြားသည့်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုအားယူပါ
Xiaomi မှ Lightinthebox ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသခဲ့သည်
OnePlus6ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်တင်ဆက်သည့်နေ့တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်
OnePlus6ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်တင်ဆက်သည့်နေ့တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်အသစ်ဖြင့်ဖုန်းဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နယ်သာလန်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia X6 အသစ်၏နောက်ဆုံးဈေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်
Nokia X6: Notch ဖြင့်ပထမဆုံး Nokia ဖုန်း၏စျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ မနက်ဖြန်တင်ဆက်သည့်ကုန်ပစ္စည်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကယင်း၏စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်။
ဒီမြှင့်တင်ရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် OUKITEL K7 ကိုရယူပါ
OUKITEL K7 သည် ၁၀,၀၀၀ mAh စွမ်းဆောင်ရည်အားဖြင့်ရက်ပေါင်းများစွာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကတိပေးသည်။ လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်ခြင်း၊ ကင်မရာနှစ်မျိုးနှင့် ၆ လက်မဖန်သားပြင်သည်ဒေါ်လာ ၉၉.၉၉ ဖြင့်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
Sirin Labs မှ Finnch ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား Blockchain ပေါ်တွင်အခြေခံသည်
Finney သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောအရည်အချင်းများရှိသောစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အစွမ်းထက်ဆုံး Qualcomm SoC ရှိပြီး၊ ၎င်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ cryptocurrencies ကိုသိုလှောင်ရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုသိပါ။
သင်၏စမတ်ဖုန်းကို HTC U12 + ၏နောက်ခံပုံအသစ်များဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်လိုပါကဤဆောင်းပါး၌ terminal ကိုသူ့ဟာသူစျေးကွက်သို့မတင်မီ၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
Xiaomi ကဒီ ၂၀၁၈ ကိုဈေးကွက်ထဲစတင်နိုင်မည့်ဖုန်းကိုငါတို့သိပြီးဖြစ်သည်
စျေးကွက်တွင် Xiaomi မှစတင်မည့်မော်ဒယ်များ၏အမည်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ ဖုန်းများပေါ်ထွက်လာပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်တွင် OnePlus6၏အဓိပ္ပါယ်ရှိသောစျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ မကြာမီစတိုးဆိုင်များတွင်စတင်ဖြန့်ချိတော့မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏စျေးနှုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအတွက် Coolpad မှတရားစွဲဆိုခဲ့သည်
မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုအတွက် Coolpad က Xiaomi ကိုတရားစွဲ Xiaomi သည်လူသိရှင်ကြားထွက်ပေါ်လာတော့မည်ဖြစ်သောကုမ္ပဏီသည်မူပိုင်ခွင့်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်ကုမ္ပဏီမှတရားစွဲဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Galaxy J4 နှင့် Galaxy J6 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
Samsung ဈေးကွက်တွင် Samsung ဖြန့်ချိမည့်နောက်ထပ် terminal ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာယခုပေါက်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Nubia V18 ကိုလည်းအနီရောင်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်
Nubia V18 ကိုအနီရောင်အသစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ မကြာမီတွင်အနီရောင်နှင့်စတင်မိတ်ဆက်မည့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှဖုန်း၏ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Motorola တွင်ခေါက်နိုင်သောဖုန်းအတွက်မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤမှတ်ပုံတင်ထားသောမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်တွင်ပါ ၀ င်ရန်အတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးခေါက်ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ
ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့တွင် BlackBerry မှဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သော BlakBerry KEY7 ကိုတင်ဆက်သည်
လပေါင်းများစွာနှောင့်နှေးခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလက BlackBerry KEYOne သည်စပိန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Xiaomi နှင့် Nokia သည်ဥရောပရှိအရောင်းရဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ငါးခုတွင်ပါဝင်သည်
Xiaomi နှင့် Nokia တို့၏တစ်နှစ်တာအတွင်းဥရောပအရောင်းရဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိပ်ဆုံးငါးကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သော Xiaomi နှင့် Nokia တို့၏ရောင်းအားကိန်းဂဏန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi ၏အိမ်အလိုအလျောက်ထုတ်ကုန်များသည် Google Assistant နှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်
Xiaomi ၏အိမ်အလိုအလျောက် Google Assistant နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်စတင်ဖြန့်ချိမည့်အချိန်တွင်ကြေငြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
ဒီနှစ်ကျရင် Pixel စမတ်နာရီကို Google ကရောင်းချတော့မှာပါ
Google သည်ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ရောက်ရှိမည့် Pixel စမတ်နာရီကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ အမှတ်တံဆိပ်လုပ်ဆောင်နေသည့်စမတ်နာရီသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ZTE ဖုန်းများသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုရရှိနိုင်သည်။ ZTE ဖုန်းရှိအသုံးပြုသူအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောဤပြproblemနာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ
Wiko View Lite: ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်ပါတဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်
Wiko View Lite: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ပြင်သစ်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Google Home နှင့် Home Mini သည်ယခုနှစ်စပိန်သို့ရောက်ရှိမည်
Google Home နှင့် Home Mini ကိုယခုနှစ်စပိန်တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသို့ကုမ္ပဏီ၏စပီကာများရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Redmi S2 သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးသိရန်ရယူပါ။
Xiaomi Redmi S2 ဖုန်းကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအလယ်အလတ်တန်းစားအဖြစ်ပေးစွမ်းနိုင်သည့်စျေးကွက်အတွင်းနေရာကောင်းကောင်းရရှိရန်နှင့်စတုတ္ထမြောက်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည့်ထုတ်ကုန်သစ် Xiaomi Redmi SXNUMX ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။ အများစုမှာ Samsung၊ Huawei နှင့် Apple တို့ပြီးလျှင်ရောင်းချသည်။
Blackview BV5800 Pro: ကုမ္ပဏီ၏နောက်ကြမ်းတမ်းသောဖုန်းသည်လာမည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်
အကြမ်းခံဖုန်းများ၏ ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Blackview သည်မကြာမီ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အသစ်ကိုစတင်မည်။ ကျနော်တို့ Blackview BV5800 Pro အကြောင်းပြောနေတာပါ။ အချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စွမ်းဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည့်နောက်လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်းအွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်မည့် Mid-range ကိုတဝက်ကျော်နင်းနိုင်သည်။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
အာရှကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော OnePlus ကကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်သစ်ကိုဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ OnePlus အဟောင်းကိုလွှဲပြောင်းပါကစိတ်ဝင်စားစရာလျှော့စျေးယူရို ၂၈၀ အထိပေးသည်။
အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်မိုဘိုင်းဖုန်းရောင်းချမှုကို ZTE ကပယ်ချ ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်ပြaနာဖြစ်စေသည့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Lenovo မှ ZUK အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းကိုဇွန် ၁၄ ရက်တွင်စတင်မည်
ZUK သည်ဇွန်လ ၁၄ ရက်တွင်ဖုန်းအသစ်ဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဈေးကွက်သို့တရားဝင်ပြန်ရောက်လာခြင်းအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုဇွန်လတွင်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်မည့်ဖုန်းအသစ်ဖြင့်တရား ၀ င်ပြန်လာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Qualcomm ၏ 845, 660 နှင့် 636 ပရိုဆက်ဆာများကိုယခုအချိန်တွင် Android P အတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုထားသည်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပရိုဆက်ဆာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Qualcomm သည်၎င်း၏ Snapdragon 845, 660 နှင့် 636 ပရိုဆက်ဆာများကို Android P နှင့်လိုက်ဖက်သည်ဟုကြေငြာလိုက်သည်။
HOMTOM သည် ၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ဒေါ်လာ ၅၀ အထိလျှော့ချပေးသည်။
Homtom သည်၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုစတိုင်ကျစွာသင်မလွဲမရှောင်သာအံ့သြလောက်သောအထူးလျှော့စျေးများဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည်။ Homtom မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသောအထူးလျှော့စျေးများသည်ကူပွန်တစ်ခုလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ မှ ၅၀ အထိရှိသည်။ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့တွင် Homtom H10, S50 နှင့်အခြားကိရိယာများစွာပါဝင်သည်။
OnePlus6ကိုမေလ ၁၆ ရက်တွင်လန်ဒန်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သော်လည်း Geekbench ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးဖြစ်သည်
OnePlus ကုမ္ပဏီသည်တရားဝင်ဖွင့်ပွဲနေ့ကိုလန်ဒန်တွင်မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည့် OnePlus6၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုနေ့ကိုတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့သည်။
Huawei Y3 (2018) ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်
Huawey Y3 (2018) - Android Go နှင့်အတူပထမဆုံး Huawei ဖုန်း။ Android Go ကိုအသုံးပြုတဲ့ပထမဆုံးတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
360 N7, ကြီးမားသည့် 5030mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်အလယ်အလတ်တန်းစားကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
360 Mobiles သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင် 360 N7 ကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားသတ်မှတ်ချက်များအရအလယ်အလတ်တန်းစားလိုအပ်ချက်ရှိသောကဏ္ its တစ်ခုအတွက်၎င်း၏ကတ်တလောက်အဖွဲ့ဝင်အသစ်ကိုစတိုင်ဖြင့်ပြသခဲ့သည်။
Sharp Aquos R2: Snapdragon 845 ပါ ၀ င်သည့် high-end သစ်နှင့်ဗီဒီယိုအတွက်သာအာရုံစိုက်ထားသောကင်မရာ
Sharp သည် Aquos R2 ကိုအဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ စွမ်းအားပြည့် Qualcomm Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကြောင့်ဤစမတ်ဖုန်းသည်အခြားထုတ်လုပ်သူများ၏အပြင်းထန်ဆုံးပြိုင်ဘက်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
BQ Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
စပိန်ကုမ္ပဏီ BQ သည် BQ Aquaris X2 နှင့် Aquaris X2 Pro တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်အဆင့်အတန်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရည်အသွေးများနှင့်အင်္ဂါရပ်များအပြင်အစွမ်းထက်။ ထူးခြားသည်။ သူတို့ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Motorola Moto G6 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
Moto G6 ကိုစပိန်တွင်တရားဝင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်ဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei / Honor သည် Android Oreo Beta ကိုမော်ဒယ် ၇ ခုအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Huawei ကုမ္ပဏီသည် Android Oreo beta ပရိုဂရမ်ကိုဆိပ်ကမ်း ၇ ခုအတွက်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကုမ္ပဏီ၏ဒုတိယတံဆိပ်အချို့ဖြစ်သော Honor မော်ဒယ်များလည်းပါဝင်သည်။
Galaxy S9 နှင့် S9 + ကိုအနီရောင်ဖြင့်တရုတ်တွင်ပြသ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Galaxy S9 နှင့် S9 + ကိုအနီရောင်ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ high-end တရုတ်ဈေးကွက်တွင်ရရှိသောအနီရောင်အရောင်သစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Oukitel U19: နောက်ထပ် iPhone X Clone သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ နီးပါးရှိလိမ့်မည်
Oukitel U19 သည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည့်ဒေါ်လာ ၁၀၀ နှင့်နီးသောစျေးနှုန်းသို့ရောက်ရှိနိုင်သော terminal ဖြစ်သည်။ iPhone X နှင့် U100 ကဲ့သို့ပင် U18 တွင် ၅.၈၅ လက်မ notch display ရှိသည်။
Xiaomi Mi7တွင်မျက်နှာပြင်အောက်၌လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Xiaomi ကအနားမယူပါဘူး။ Xiaomi Mi7အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ နောက်လက်ဗွေဖတ်စနစ်လိုနောက်လာမယ့်အထင်ကရတပ်ဆင်ထားတဲ့ပုံရှိပေမယ့် Vivo X21 လိုမျက်နှာပြင်အောက်မှာရှိနေတယ်။ ဒီ feature နှင့်အတူပထမဆုံးမိုဘိုင်း, ကသယ်ဆောင်။
Leagoo S9 ကိုယူရို ၁၁၀ ဖြင့်သာရယူပါ
ရက်အနည်းငယ်အတွင်း Leagoo S9 ကိုဒေါ်လာ ၁၂၉.၉၉၊ ယူရို ၁၁၀ ခန့်ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ငွေရေးကြေးရေးအတွက်အလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုပေးသည့်စိတ်ကူးယဉ်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်။
Xiaomi Redmi S2: အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်စျေးနှုန်းများသည် Aliexpress တွင်ပေါက်ကြားသည်
Xiaomi Redmi S2: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ပေါက်ကြားထားသောပုံများ။ အချက်အလက်များကို Aliexpress တွင်ပေါက်ကြားထားသည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Vivo Y75s နှင့် Vivo Y83 တို့သည် TENAA တွင်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်
Vivo Y75s နှင့် Vivo Y83: အသစ်ထွက်လာသောအလယ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ။ မကြာမီဖြန့်ချိတော့မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung ၏အထောက်အပံ့စာမျက်နှာတွင်ပေါက်ကြားပြီးနောက် Galaxy J6 ကိုဖြန့်ချိမည်
အိန္ဒိယနှင့်ယူကရိန်းရှိ Samsung အထောက်အပံ့စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Samsung Galaxy J6 ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိမည့်နေ့ရက်နီးပြီ
OnePlus6တွင်နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်
OnePlus6တွင်နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ Galaxy S9 ရှိလိမ့်မည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းသို့လာမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Honor 7S: 18:9မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်အသစ်စက်စက်
Honor 7S: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ တစ်လအတွင်းဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှနိမ့်ကျသည့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Redmi S2 ကိုမေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်
Xiaomi ကမေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ Xiaomi Redmi S2 ကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်၏တင်သည့်ရက်စွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S10 ကို ၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီလတွင်ပြသနိုင်သည်
ကိုရီးယားမှနောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာသောကောလာဟလများအရ Samsung သည်နောက်နှစ်နောက်တစ်နှစ်တွင်လာမည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် Samsung Galaxy S10 ၏တင်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး MWC ကိုဘေးဖယ်ထားနိုင်သည်။
OnePlus6၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်
TENAA တွင်အသိအမှတ်ပြုထားသော OnePlus 6: ကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များရှိပြီးဖြစ်သည်။ TENAA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးစီးခဲ့သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Wear OS အတွက် Google Assistant ကိုစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေနဲ့ update လုပ်တယ်
Wear OS အတွက် Google Assistant ကိုအင်္ဂါရပ်သုံးခုနဲ့မွမ်းမံထားတယ်။ စမတ်နာရီများမှလက်ထောက်သို့လာသည့်ဤအင်္ဂါရပ်အသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Wiko Jerry 3: 18:9မျက်နှာပြင်ပါသော Android GO စမတ်ဖုန်းအသစ်
Wiko Jerry 3: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စတင်ခြင်းနှင့်တရားဝင်စျေးနှုန်း။ ယခုရရှိနိုင်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၏နိမ့်ကျသောဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်တရုတ်တွင်စျေးကွက်ဝေစု ၁ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိပြီး၊ အကြီးဆုံးဈေးကွက်ဖြစ်သည်။
HTC U12 + ကိုမေလ ၂၃ ရက်တွင်ပြသမည်
HTC U12 + ကိုမေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ကြေညာမည်။ ထိုင်ဝမ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်သစ်၏တင်ပြသည့်ရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
Samsung Galaxy Apps ကဒေါ်လာရာနဲ့ချီတဲ့ in-app ဝယ်ယူမှုတွေကိုပေးနေတယ်
Galaxy Apps ကဒေါ်လာရာနဲ့ချီတဲ့ In-app ဝယ်ယူမှုတွေကိုပေးတယ်။ ဒီမြှင့်တင်ရေးအကြောင်းကို Samsung ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းမှာရှာပါ။
Samsung က Galaxy A6 နှင့် Galaxy A6 + ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည် Galaxy A6 နှင့် Galaxy A6 Plus အသစ်ကို၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားရှိ Galaxy S9 ရောင်းအားသည်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်
တောင်ကိုရီးယားမှာ Galaxy S9 ရောင်းချမှုဟာမျှော်လင့်မထားပါဘူး။ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့သင့်နိုင်ငံမှာဖုန်းရောင်းအားနည်းတာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy Tab S4 ကဈေးကွက်ထဲရောက်တော့မယ်
Samsung Galaxy Tab S4 သည်မကြာမီဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ Samsung ၏တက်ဘလက်အသစ်ကိုစျေးကွက်ထဲသို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ၊ ၎င်းသည်ကြာမြင့်စွာမပြုလုပ်သင့်ပါ။
အမေနေ့သည်ယခုနှစ်အထူးထူးခြားသည့်နေ့တစ်နေ့နီးကပ်လာပြီ။ ၎င်းကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ပေးသောထိုမိန်းမဘေးတွင်မည်သည့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းကိုကျင်းပနိုင်မည်နည်း။ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့်သင်တစ်လုံးရရှိနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Xiaomi သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စတုတ္ထရောင်းအားအကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်းတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အမေများနေ့ကိုကျင်းပရန်မည်သည့် ၀ ယ်ရမည်ကိုသင်မသိသေးပါက၊ အမေသည်သူမ၏စမတ်ဖုန်းအဟောင်းကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောစျေးပေါသောစမတ်ဖုန်းများစာရင်းဖြစ်သည်။
Google နှင့် Fitbit သည်အသုံးပြုသူ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုင်းတာသည့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်
Google နှင့် Fitbit တို့သည်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုတိကျစွာတိုင်းတာနိုင်ရန်ဝတ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်မည် ကျန်းမာရေးကဏ္ enter သို့ ၀ င်လိုသောကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံး၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OUKITEL K7: ၁၀,၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါသောဖုန်းအသစ်
OUKITEL K7: 10.000 mAh ဘက်ထရီပါသည့်ကိရိယာသစ်။ မကြာမီဖြန့်ချိမည့်၎င်း၏ကြီးမားသောဘက်ထရီကိုထင်ရှားပြမည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းသို့မဟုတ်လအနည်းငယ်အတွင်းအုပ်စုလိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသည် Mark Zuckerberg မှမနေ့ကစတင်ခဲ့သည့် F8 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ WhatsApp messaging platform သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Galaxy Note9ဗားရှင်းနှစ်မျိုး
Galaxy Note9ဗားရှင်းနှစ်မျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ မတူညီသောဗားရှင်းနှစ်ခုရှိမည့်ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei P20 Pro သည်အကျော်ကြားဆုံးခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံယူသည်
Huawei P20 Pro သည် JerryRigEeverthing ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံယူသည်။ high-end သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်လူသိအများဆုံးစာမေးပွဲနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
Android Oreo ကို Galaxy S7 နှင့် S7 Edge အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ
Samsung Galaxy S7 နှင့် Galaxy S7 ၏ Android Oreo update ကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ရရှိပြီး ဖြစ်၍ ကျန်နိုင်ငံများသို့ရောက်ရှိရန်နှောင့်နှေးမည်မဟုတ်ပါ။
Xiaomi သည်မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်အီတလီ၌၎င်း၏ပထမဆုံးစတိုးကိုဖွင့်လှစ်မည်
Xiaomi သည်မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်မီလန်၌၎င်း၏စတိုးဆိုင်သစ်ကိုဖွင့်မည်။ မေလကုန်တွင်ရောက်ရှိမည့် Transalpine တိုင်းပြည်ရှိတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးစတိုးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy A6 (2018) နှင့် Galaxy A6 + (2018) စျေးနှုန်းများနှင့်ယိုစိမ့်သောအင်္ဂါရပ်များ
Samsung Galaxy A6 (2018) နှင့် A6 + (2018) တို့သည်သူတို့၏စျေးနှုန်းများကိုဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်းဖြန့်ချိခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင် ၀ က်ဘ်ကိုလှည့်လည်သွားလာနေသူအများအပြားကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်ငြင်းဆိုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့် Xiaomi Redmi S2 ၏ဗီဒီယိုကိုစစ်ထုတ်သည်
Xiaomi Redmi S2: ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဗီဒီယိုပေါက်ကြားခဲ့သည်။ မကြာမီဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည် Mi Band3၏ပထမဆုံးပုံရိပ်ကိုပြသသည်
Xiaomi သည် Mi Band3၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်မှာ၎င်းတွင်ရှိမည့်ဒီဇိုင်းကိုဖော်ပြပြီးသောအမှတ်တံဆိပ်လက်ကောက်၏ပထမဆုံးပုံရိပ်ကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei P20 Pro သည်အနောက်ဥရောပတွင်အရောင်းရဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်
Huawei P20 Pro ကိုအနောက်ဥရောပတွင်ရောင်းချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ရောင်းအားနှင့် ပတ်သက်၍ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။
Xiaomi သည် Android One နှင့်ဖုန်းနှစ်လုံးကိုဈေးကွက်ထဲဖြန့်ချိမည်
Xiaomi သည် Android စနစ်ဖြင့်ဖုန်းနှစ်လုံးကို operating system အဖြစ်ထုတ်လုပ်မည်။ ဒီ operating system ဗားရှင်းနဲ့အတူမော်ဒယ်နှစ်မျိုးကိုစတင်ရန်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S9 Active သတ်မှတ်ချက်များပေါက်ကြား
Samsung Galaxy S9 Active, ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Galaxy S9 ၏အကြမ်းခံသောဗားရှင်းသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Android Wear နှင့် Wear OS အတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခု သင်၏ Smart Watch တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်ဤရွေးချယ်မှုများကိုရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy A6 ၏အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုပေါက်ကြားခဲ့သည်
လာမည့် Galaxy A6 နှင့် A6 + တို့၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်များယိုစိမ့်သွားပြီးနောက်၊ ယခု၎င်းသည်ဆမ်ဆောင်းမှဗွီဒီယို၏အလှည့်ဖြစ်သည်။
Essential ဖုန်းကိုယူကေနှင့်ပြင်သစ်တို့တွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သော MWC၊ Essential ဖုန်း၌အာမခံထားသကဲ့သို့ဥရောပ၊ အနည်းဆုံးယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ပြင်သစ်နှင့်ဂျပန်တွင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
Huawei သည် Android အတွက်အခြားစနစ်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်နေသည်
Huawei သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် operating system ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်မှုစနစ်ဖန်တီးသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia X ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Nokia X ၏ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များတွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ မေလတွင်တင်ပြမည့်ကုမ္ပဏီမှအလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei နှင့် Gal Gadot (Wonder Woman) တို့သည် Huawei Mate 10 Pro ကိုကြေငြာခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအရူးလုပ်ကြသည်
မင်းသမီး Gal Gadot နှင့် Huawei တို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Huawei Mate 10 Pro ကိုကြော်ငြာရန်အိုင်ဖုန်းကို အသုံးပြု၍ သူတို့ကိုယ်သူတို့အရူးလုပ်ကြသည်။
Motorola သည် Moto G30 ၏စီးရေသန်း ၃၀ ရောင်းရန်မျှော်လင့်ရသည်
Motorola က Moto G6 ကိုယူနစ်သန်း ၃၀ ရောင်းချရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ ဖုန်းအသစ်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားမျှော်လင့်ချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei တွင်၎င်းတို့တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောမူပိုင်ခွင့် ၇၄၊၃၂၆ ရှိသည်
Huawei သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောမူပိုင်ခွင့် ၇၄,၃၂၆ ခုရှိသည်။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဦး ဆောင်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်သူ့ဟာသူထူထောင်ခဲ့သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏မူပိုင်ခွင့်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
OnePlus6တွင်နှေးသောဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပါရှိသည်
OnePlus6သည်နှေးသောဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အဆင့်မြင့်ဖုန်းရှိမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် Verizon မှ HTC U12 ကိုပေါက်ကြားခဲ့သည်
HTC U12 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုအမေရိကန်အော်ပရေတာ Verizon ၏စာမျက်နှာတွင်ပေါက်ကြားထားသည်။ ဒီပစ္စည်းကိုထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းအားအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ HTC U12 Plus (U12 +) လည်းပါ ၀ င်မှာပါ။
ဖြစ်နိုင်သမျှ Xiaomi Mi Pad4တက်ဘလက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတွေ့ခဲ့သည့် Mi Pad4၏ဆက်ခံသူ Xiaomi Mi Pad3တက်ဘလက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သော Qualcomm Snapdragon 660 ရှစ် core ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူစူးစမ်းလေ့လာလိုသည့်မျက်နှာပြင်နှင့်လာသည်။ ငါတို့ကိုပြောတယ်
Xiaomi သည် ၄ ​​င်း၏ဖုန်းများ၏စျေးနှုန်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကတိပြုခဲ့သည်
Xiaomi သည် ၄ ​​င်း၏ဖုန်းများ၏စျေးနှုန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းမတက်ဖို့အကြောင်းပြချက်တရုတ်ကုမ္ပဏီအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် Huawei ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အီရန်နိုင်ငံနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Nokia X6 ကို27ပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်
Nokia X6 ကိုAprilပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာတရားဝင်ကြေငြာမှာဖြစ်တယ်။ ဒီသောကြာနေ့မှာတင်ဆက်နိုင်မယ့်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ယခုအခါ Xiaomi Mi 6X သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Xiaomi Mi 6X: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ရောင်းချမှု။ ဒီနေ့တရားဝင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အတည်ပြုသည်: OnePlus6ကိုမေလ ၁၇ ရက်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌တင်ဆက်မည်ဖြစ်သည်
OnePlus6ကိုမေလ ၁၇ ရက်တွင်တရုတ်၌တရားဝင်ပြသမည်။ ကုမ္ပဏီ၏အတည်ပြုချက်အရမေလက high-end ဖုန်း၏တင်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy A3 2017 ကို Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်သည်
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Galaxy A3 2017 အတွက် Android Oreo update ကိုရုရှားတွင်နေထိုင်သူများအတွက်စတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ရာကျန်ဥရောပသို့ရောက်ရှိရန်အချိန်များစွာမယူရပါ။
၎င်းသည် Xiaomi လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အသစ်ဖြစ်ပြီးယူရို ၁၀၀၀ အောက်သာရှိသည်
Super Soco: Xiaomi ၏လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်သည်ယူရို ၁၀၀၀ အောက်သာရှိသည်။ မကြာမီဈေးကွက်တွင်မကြာမီစတင်တော့မည်ဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဤလျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည် Android One ဖြင့်ဖုန်းများပိုမိုရောင်းချပေးသည်
Xiaomi (ရှောင်မီ) သည် Android One ဖြင့်ဖုန်းများပိုမိုဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ Android ဗားရှင်းကို၎င်းတို့၏ဖုန်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အစီအစဉ်များကိုလေ့လာပါ။
HOMTOM ပရိသတ်များပွဲတော် - HOMTOM ဖုန်းများအတွက်အထူးလျှော့စျေးကိုရယူပါ
TomTop ရှိ HOMTOM ဖုန်းများအတွက်အထူးလျှော့စျေးများကိုရယူပါ။ promotပြီလ ၃၀ ရက်အထိကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအမျိုးအစားများကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်သင်ဝယ်ယူနိုင်သောဤပရိုမိုးရှင်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy A6 ၏ပုံရိပ်အသစ်များ၊ ယခုကိစ္စတွင်မရှိတော့ပါ
နောက်လာမယ့် Samsung terminal ကိုဈေးကွက်ထဲဘယ်လိုရောက်သွားမလဲဆိုတာပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကတော့ Samsung Galaxy A6 နဲ့ A6 +
OnePlus6တွင်နောက်ဘက်တွင်ဖန်ခွက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားလိမ့်မည်။ ဖန်နှင့်ပြုလုပ်မည့်ကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
OUKITEL WP5000: အလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်အစွန်းရောက်အခြေအနေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဖုန်း
OUKITEL WP5000: ကြမ်းတမ်းသောဖုန်းကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်။ အကောင်းဆုံးအရောင်းမြှင့်တင်ရေးဈေးနှုန်းဖြင့်ယခုရရှိနိုင်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy S7 ကို Android Oreo သို့မေလအထိနှောင့်နှေးခဲ့သည်
နောက်ဆုံးပေါ် Galaxy S7 နှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးသတင်းများအရ Android Oreo ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုမေလလယ်အထိတစ်လကြာနှောင့်နှေးနေကြောင်းဖော်ပြသည်။
Samsung Galaxy A6 နှင့် A6 + ဒီဇိုင်း၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များ
Galaxy A6 နှင့် Galaxy A6 + တို့၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များသည်အမှုထုတ်လုပ်သူများထံမှထွက်ပေါ်လာသောပုံရိပ်များမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
စမတ်ဖုန်းမြင့်တက်အပေါ်တစ် ဦး အစိတ်အပိုင်း« gamer »
အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းကစားစမတ်ဖုန်းများ၊ အပိုစွမ်းအားရှိသောဖုန်းများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုကို console တစ်ခုနှင့်ဆင်တူသည်ကိုသင်ကြားဖူးသည်။
Bluboo S3 ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်စတင်ရန်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်တွေ့ဆုံပါ
Bluboo S3 ကိုမယှဉ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ရယူပါ။ 8000 mAh ဘက်ထရီ၊ ၆ လက်မဖန်သားပြင်နှင့် 6Mpx + 21 Mpx ရှိ Samsung dual camera တို့ဖြင့်သင်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရနိုင်သည်။
Xiaomi Black Shark ကိုပထမဆုံးနေ့မှာရောင်းလိုက်ပြီ
Xiaomi Black Shark ကိုပထမဆုံးရောင်းချသည့်နေ့တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ရောင်းချခဲ့သည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းရောင်းလိုက်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှပထမဆုံးဂိမ်းဖုန်း၏အောင်မြင်မှုကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
TENAA စာရင်းသစ်အရ Xiaomi Mi 6X ၏ထူးခြားချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
TENAA မှ Xiaomi Mi 6X ၏အရည်အသွေးအသစ်များစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးသားသူများနှင့်ကွဲလွဲနေသည် ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားကိုလာမယ့်25ပြီလ ၂၅ ရက်မှာတရုတ်ကုမ္ပဏီ Xiaomi ကငါတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးမယ့်တင်ဆက်မှုတစ်ခုကနေရောက်ရှိလာမှာပါ။
Android Wear ဖြင့်သင်၏စမတ်နာရီအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
Android Wear နှင့်အတူနာရီများအတွက်အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်။ Android Wear နာရီနှင့်အတူအသုံးပြုသူများအတွက်ဤလှည့်ကွက်များကိုရှာဖွေပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ smartwatch မှပိုမိုရလိမ့်မည်။
eBay Super Weekend တွင် ၆၀% လျှော့စျေးဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်
အထူးသဖြင့် Android စမတ်ဖုန်းများတွင် EBay ၏ Super Weekend အမှတ်တံဆိပ်အားလုံး၏အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များတွင် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့စျေးဖြင့်ပြန်လည်အောင်မြင်ခြင်း
ကြီးမားသည့် 5mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့် Ulefone Power 13000 နှင့်တွေ့ဆုံပါ
အာရှကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Ulefone သည် ၁၃၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါသည့်အလယ်အလတ်တန်းစား Android terminal တစ်ခုဖြစ်သော Ulefone Power5ကိုဘက်ထရီနှင့် plug ကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
Nubia Red Magic - ဈေးကွက်ထဲမှာဂိမ်းစမတ်ဖုန်းအသစ်
Nubia Red Magic: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာတရားဝင်မိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှပထမဆုံးသောဂိမ်းကစားခြင်းဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Moto E5, E5 Plus နှင့် E5 Play - Motorola ၏ ၀ င်ရောက်မှုအကွာအဝေးပိုမိုကောင်းမွန်သည်
Moto E5, E5 Plus နှင့် E5 Play: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်း။ ဒီကနေ့တရားဝင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သောကုမ္ပဏီမှဒီ entry အသစ်အကွာအဝေးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Motorola Moto G6, G6 Plus နှင့် G6 Play - အလယ်အလတ်တန်းစားသက်တမ်းတိုး
Moto G6, G6 Plus နှင့် G6 Play - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ တရား ၀ င်တင်ပြပြီးသောတံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
Leagoo S10 သည်ဟောင်ကောင်ရှိ Global Sources 2018 တွင်တင်ဆက်သည့်ကုမ္ပဏီ၏ကတ်တလောက်နှင့်ဆက်သွယ်သည်
Leagoo သည်နောက်ထပ်ထင်ရှားသော Leagoo S10၊ နောက်ဘက်ကင်မရာသုံးလုံးနှင့်မျက်နှာပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေဖတ်သည့် Android မိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်သူ၏အစီအစဉ်များနှင့်လက်လီလုပ်ငန်းကဏ္heတွင်သူမည်သို့ ဦး တည်မည်ကိုတင်ပြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Huawei သည်၎င်း၏ Kirin ပရိုဆက်ဆာများကိုအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသို့ရောင်းချရန်မရည်ရွယ်ပါ
Huawei သည် Kirin ပရိုဆက်ဆာများကိုအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသို့ရောင်းချမည်မဟုတ်။ ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်သူတို့၏ပရိုဆက်ဆာများကိုအဘယ်ကြောင့်အခြားကုမ္ပဏီများသို့မရောင်းလိုသည့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Honor 10: Honor ရဲ့ high-end အသစ်ဟာအခုတရားဝင်ဖြစ်နေပြီ
ဂုဏ်ထူး ၁၀ - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ပစ်လွှတ်ခြင်း။ ဒီကနေ့တရုတ်ပြည်မှာတရားဝင်တင်ဆက်ထားတဲ့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့အဆင့်မြင့်အကြောင်းကိုအားလုံးရှာဖွေပါ။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များ, စျေးနှုန်းနှင့်စျေးကွက် hit လိမ့်မယ်ဘယ်အချိန်မှာ။
Samsung Galaxy A5 2017 ကို Android Oreo 8.0 ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Galaxy A5 2017 အတွက် Android Oreo update ကိုယခုအခါ download ရယူနိုင်သည်။
Nokia7Plus ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
Nokia7Plus ကိုယခုစပိန်တွင်တရားဝင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ MWC 2018 တွင်ပြသခဲ့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းနှင့်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
US embargo ကြောင့် ZTE ကို Android မသုံးဘဲကျန်ခဲ့နိုင်သည်
အမေရိကတွင်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ZTE သည်၎င်း၏ Android လိုင်စင်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ကုမ္ပဏီရင်ဆိုင်နေရသည့်ပြproblemsနာများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
AnTuTu သည်စျေးကွက်အတွင်းတွင်တစ်လပြီးတစ်လအားဖြင့်စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးသောဆိပ်ကမ်းများစာရင်းကိုပေးသည်။ ထိုအချိန်၌ Samsung ၏ flagships အသစ်နှစ်ခုဖြစ်သော Galaxy S9 နှင့် S9 Plus စမတ်ဖုန်းများထပ်မံပေါင်းထည့်သည်ကိုသတိပြုမိနိုင်သည်။
၎င်းကိုတင်ပြခြင်းမပြုမီ Nubia Z18 ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Nubia Z18: high-end ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Bluboo S3 သည် ၈၅၀၀ mAh ဘက်ထရီပါသောစီးပွားရေးမိုဘိုင်း
Bluboo S3 ၏ terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုရက်ပေါင်းများစွာကတည်းကသိခဲ့ပြီး၎င်းသည် Banggood မှAprilပြီ ၁၈ ရက်မနက်ဖြန် မှစ၍ စတင်၍ ၁၆၅ ယူရိုထက်နိမ့်သောဈေးဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
Samsung သည်အထူးထုတ်ဝေသည့် Galaxy S9 Formula 1 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့်သြစတြီးယား Grand Prix ပွဲတွင် Vodafone သည် Red Bull နှင့် Samsung တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ အထူး Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 တို့ကိုအထူးထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Xiaomi Mi 6X ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်များကိုပြသလိုက်သည်
Xiaomi Mi 6X ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်များသည်အမှန်တကယ်ပင်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ အပြည့်အဝမိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Consumer Reports သည် Galaxy S9 ကိုဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်
အမေရိကန်လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Consumer Reports ၏အဆိုအရ Galaxy S9 နှင့် S9 + သည်လက်ရှိတွင်အဆင့်မြင့်အကွာအဝေးတွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။
Samsung က Notch ပါတဲ့ Screen တစ်ခုလုံးကိုမူပိုင်ခွင့်ပေးပါတယ်
Samsung က All-screen notch phone ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ notch ပါသောဖုန်းကိုထုတ်ပေးသောကုမ္ပဏီ၏မူပိုင်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus6သည်ဗီဒီယိုအသစ်အရရေစိုခံနိုင်သည်
OnePlus6သည်ရေစိုခံလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်တင်ပို့ခဲ့သောဗွီဒီယိုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါကဖုန်းသည်ရေစိုခံနိုင်ကြောင်းအတည်ပြုသည်
Sony Xperia XZ2 Premium သည် dual-camera နှင့် 4K screen ပါ ၀ င်သည်
Sony Xperia XZ2 Premium အသစ်၏စီးရီးတစ်ခုလုံး၏စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးကိရိယာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်
Oukitel WP5000 ၏ unboxing
Oukitel WP5000 ၏ဈေးကွက်သို့မလာမီရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဤ terminal ကို၎င်း၏အဓိကလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်အတူဒီ terminal ကိုအပြည့်အဝဖြုတ်ပစ်ခြင်းကိုမြင်နိုင်သည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
Xiaomi Mi A1 ဟာအိန္ဒိယမှာကုန်ပစ္စည်းရှိသည်
Xiaomi Mi A1 ကိုအိန္ဒိယမှာရောင်းပြီ Xiaomi Mi A2 သည်စတိုးဆိုင်များ၏အဆုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုလျှင်မကြာမီစတိုးဆိုင်များသို့ ၀ င်ရောက်တော့မည်ဖြစ်သည်။
Honor 10 သည် TENAA ကိုဖြတ်သန်း။ ၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်
Honor 10 ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ တရုတ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့် TENAA မှပြောကြားသည်မှာ၎င်း၏ထူးခြားချက်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကြောင့်အခြားကုမ္ပဏီများ၏အခြားထင်ရှားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုက်ခိုက်နိုင်သည့်စွမ်းအားနှင့်လာမည့်လတွင်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။ ရုံထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ငါတို့ကိုပြောမယ်
Xiaomi Mi 6X ၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ပုံသည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်
Xiaomi Mi 6X ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်သည်အမှန်တကယ်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ မကြာမီဈေးကွက်တွင်မကြာမီဖြန့်ချိမည့်Aprilပြီ ၂၅ ရက်တွင်တရားဝင်ပြသမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HMD Global ကိုXပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် Nokia X မိတ်ဆက်မည်
Nokia X ကိုAprilပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ကြေညာမည်။ ဒီလနှောင်းပိုင်းမှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းအသစ်မိတ်ဆက်မည့်နေ့အကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Donald Duck Augmented Reality Emoji ကို Galaxy S9 တွင်တပ်ဆင်နည်း
ယခုငါတို့ Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 + ရှိ AR Emoji Donald Duck ကိုခံစားနိုင်သည်။ သင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင်မသိပါကဤဆောင်းပါး၌၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည်။
Nubia Red Devil ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံကိုစစ်ထုတ်သည်
Nubia Red Devil: တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဂိမ်းကစားခြင်းဖုန်း၏ပထမဆုံးပုံရိပ်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ ဖုန်းသည်မည်သည့်အရာကိုပြရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။ မင်းသိပ်မမြင်နိုင်ပေမယ့်
ပိုစတာအသစ်က Xiaomi Mi 6X ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီ
Xiaomi Mi 6X ၏ပထမဆုံးပိုစတာကိုဖော်ပြပြီးပြီ။ brandပြီ ၂၅ ရက်တွင်တင်ဆက်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်း၏ပထမဆုံးအရောင်းမြှင့်တင်ရေးပိုစတာကိုရှာဖွေပါ။
Vivo V9 လူငယ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
Vivo V9 လူငယ်။ ဖုန်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ မကြာမီဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည်ဟုမျှော်လင့်ရသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Mi 6X ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်၎င်း၏ firmware အရသိရသည်
Xiaomi Mi 6X ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဤဖုန်း၏မကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့သော firmware အရသိသိသာသာများပြားလှသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့် TENAA မှတရုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသောစက်များမှတစ်ဆင့်countryရာမအာရှနိုင်ငံများတွင်ရောင်းချမည့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။ ။
Samsung SM-G8850 သည် AnTuTu တွင်၎င်း၏အဓိကသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူပေါ်လာသည်
Samsung SM-G8850 သည် TENAA တွင်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံးသောသူများအနက်ရှစ် core Qualcomm Snapdragon 660 ပရိုဆက်ဆာ၊ Android 8.0 Oreo နှင့် ၂၂၂၀ x ၁,၀၈၀ p မျက်နှာပြင်ရှိသည်။
Vernee သည် 6GB RAM နှင့် 64 GB သိုလှောင်မှုရှိသောအထူးဗားရှင်း Vernee ကိုထုတ်မည်
အာရှကုမ္ပဏီ Vernee မှစတင်မည့်နောက်ထပ် terminal တစ်ခုမှာ Vernee X1 ဖြစ်သည်။ မော်ဒယ်လ်သည် RAM6GB နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၆၄ GB ရှိပြီးယူရို ၂၀၀ အောက်သာရှိသည်။
Xiaomi Black Shark: တံဆိပ်၏ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းသည်ယခုအခါတရားဝင်ဖြစ်သည်
Xiaomi Black Shark: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိမှု။ ဒီနေ့ကြေညာခဲ့တဲ့တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကနေပထမဆုံးဂိမ်းစမတ်ဖုန်းအကြောင်းလေ့လာပါ။
OnePlus 5T သည်ဥရောပတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ရောင်းချပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာဥရောပ၌ရောင်းပြီးသောဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Red Devil: Nubia ၏ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းကိုAprilပြီလ ၁၉ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်
Nubia သည် Red Devil ဂိမ်းဖုန်းကို19ပြီ ၁၉ ရက်တွင်ပြသလိုက်သည်။ လာမည့်အပတ်တွင်တရားဝင်တင်ဆက်မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးဂိမ်းဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi ကnewပြီလ ၂၅ ရက်မှာ Xiaomi Mi 25X ဖုန်းအသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသမှာပါ
Xiaomi သည်newပြီလ ၂၅ ရက်တွင်၎င်း၏ဖုန်းအသစ်ကိုပြသမည်။ ယခုလကုန်ပိုင်းတွင်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ထုတ်ကုန်အသစ်ကိုမိတ်ဆက်မည့်အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Y6 2018 နှင့် Huawei Y7 2018 - Y အကွာအဝေးရှိဖုန်းအသစ်များ
Huawei Y6 2018 နှင့် Huawei Y7 2018 - အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ယနေ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှ Y-range ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
TENAA တွင် Samsung SM-G8850 ပေါ်လာသည်။ Samsung Galaxy S9 Mini လား။
မကြာသေးမီကတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီမှဖြစ်နိုင်သည့် Samsung Galaxy S8850 Mini ဖြစ်သည့် Samsung SM-G9 သည်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ TENAA ၏အဆိုအရဤစက်ပစ္စည်းသည်အခြားကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအပြင် ၅.၈ လက်မအရွယ် Super AMOLED ဖန်သားပြင်တွင်ရက်ရောသော QuadHD + resolution 5.8 x 2.960 pixels ရှိသည်။
Xiaomi Black Shark ၏ဗွီဒီယိုအတိုမှာပေါက်ကြားခဲ့သည်
Xiami Black Shark ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင် terminal လူမှုကွန်ယက်ဖြစ်သော Weibo တွင် terminal ၏ဗီဒီယိုတိုတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
iFixit အဆိုအရ Huawei P20 Pro အသစ်သည် ၁၀ ခုအနက်မှ ၄ ခုကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခဲ့သည်
iFixit ယောက်ျားတွေရဲ့လက်ထဲမှာ Huawei P20 Pro ဟာအခုမှမပြီးသေးဘူး၊ ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ရမှတ်တစ်ခုရထားတယ်။
Fortnite နှင့်လိုက်ဖက်သော Android ဖုန်းများ၏စာရင်းကိုသိရန်ကြိုးစားပါ။
ယခုအချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Fortnite သည် GooglePlay Store တွင်ဖြန့်ချိချိန်၌ဂိမ်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော Android ဖုန်းများစာရင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ မင်းတို့သိအောင်ငါတို့ပြောတယ်။
Google Store သည်ပထမမျိုးဆက် Pixel ရောင်းချခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်
Pixel ၏ပထမမျိုးဆက်ကို Google Store တွင်ရောင်းချခြင်းမရှိတော့ပါ။ တရားဝင်စတိုးဆိုင်၌ကုမ္ပဏီ၏ပထမ ဦး ဆုံးဖုန်းများရောင်းခြင်း၏အဆုံးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Samsung Galaxy J7 Duo သည်ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည် Samsung Galaxy J7 Duo အဆင်သင့်ရှိပြီး၊ အိန္ဒိယအိန္ဒိယ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရူပီး ၁၆,၉၉၀ ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိမိုဘိုင်းဖုန်းရှိသည်။ ဤပစ္စည်းသည်အမှတ်တံဆိပ်၏ J စီးရီး၏ terminal တစ်ခု၏ပုံမှန်ဒီဇိုင်းနှင့်စတိုင်လ်နှင့်အတူပါရှိသည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
ငါတို့သည်သင်တို့ကို Nubia Z18 Mini ကို, ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်အကွာအဝေးသစ်ကိုတင်ပြ
Nubia Z18 Mini, Z18 ၏သေးငယ်သောမူကွဲ၊ ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားဟာသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များအားလုံးနှင့်အတူထွက်ပေါ်လာတာပါ။ လုံးဝမဆိုးပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေ၊ -range ပရီမီယံ။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
Blackview P10000 Pro: သုံးစွဲမှုနည်းပြီး ၁၁၀၀၀ mAh ဘက်ထရီ
Blackview P10000 Pro: ဘက်ထရီစားသုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ ဒီဘက်ထရီစစ်ဆေးမှုခံယူပြီးမည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲဖြတ်သန်းသွားသောဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည် Mi 5, Mi MIX နှင့် Mi Note2အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Android Oreo beta ကိုဖွင့်သည်
Xiaomi Mi 5, Mi MIX နှင့် Mi Note2တို့သည် Android Oreo beta ကိုရရှိသည်။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သုံးခုအတွက်တရားဝင်ဖွင့်လှစ်သော beta အစီအစဉ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ZTE သည် Axon 9, Axon9Pro နှင့်အခြားမော်ဒယ်များကိုမှတ်ပုံတင်သည်
ZTE သည် Axon9နှင့်9Pro နှင့်အခြားဖုန်းများကိုမှတ်ပုံတင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်သော ၂၀၁၈ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်စတိုးဆိုင်များသို့ရောက်ရှိလာမည့်ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Ulefone S7 Go တွင် Android Go (Oreo Edition) ပါဝင်မည်။
Ulefone S7 Go - Android Go (Oreo Edition) ပါသောဖုန်းအသစ်။ မကြာမီစျေးကွက်သို့ရောက်တော့မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ပုံစံအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
LEAGOO S9: ဒေါ်လာ ၁.၉၉ ဖြင့်ကြိုတင်မှာယူနိူင်သည့်အမှတ်အသားဖုန်း
LEAGOO S9 ကိုဒေါ်လာ ၁.၉၉ ဖြင့်ကြိုတင်မှာယူပါ။ ဒီအထူးမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကိုတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းမှာမကြာခင်ဈေးကွက်ထဲရောက်တော့မှာပါ။